Chii chinonzi fake freelancer? | Kugadzira uye zvidzidzo
Chii chinonzi fake freelancer?
Maite Nicuesa | 22/10/2021 23:27 | Jobho Kubuda
Nyanzvi dzakawanda dzinoita basa radzo sevakasununguka. Nenzira iyi, vanoteedzera maitiro emutemo kunyoresa uye kupa masevhisi avo kune vakasiyana vatengi. Ivo vanozvishandira uye, saka, vanobata nguva yavo nekuwanikwa kukuru. Ndiyo imwe nzira yaungafunga nezvayo kana uchitsvaga basa.
Pamusoro pekutarisana nemaitiro akasiyana ekusarudza uye kusarudza kubvunzurudzwa nemakambani ari kutsvaga vamiriri vezvinzvimbo zvakasiyana, unogona zvakare kuisa mari mupurojekiti yako. Nekudaro, pane pfungwa yaungangodaro wakambonzwa pane imwe nguva: manyepo kuzvimiririra. Shoko iri rinorevei?
1 Ndeapi mamiriro enhema ekuzvishandira
2 Maitiro ekusiyanisa venhema vanozvishandira kubva kune vanovimba vanozvishandira
Ndeapi mamiriro enhema ekuzvishandira
Mamiriro ezvinhu aya anoitika kana nyanzvi ichiitira kambani basa uye, zvisinei, inofanirwa kunyoresa semunhu anozvishandira. Kunyangwe iri mamiriro ayo dzimwe nguva anogona kuverengerwa mune mamwe mabasa ekushambadza, iri fomula isingaenderane nemirairo inodiwa.
Izvo zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti kana nyanzvi ichiita basa rakasununguka, ivo vanobatanidzwa mune zvese zvikamu zvepurojekiti yavo. Chengetedza mari mune yako brand kuti uwane kuoneka kukuru nevateereri vako. Iyo zvakare inoita zviito zvekushambadzira kuratidza masevhisi ayo kune vangangove vatengi.. Kune rimwe divi, dzidzira kushamwaridzana kuti uwedzere network yako yevanobatika uye kumisa kudyidzana kunobvira. Sarudza nzira dzinodiwa kukudziridza basa rako. Kune zvakare nzvimbo dzehunyanzvi dzakagadzirirwa zvakanyanya kusimudzira budiriro yemafreelancers. Kushanda pamwe chete inzvimbo yekugadzira iri kusimukira uye ine nzira yekubatana.
Uye pakupedzisira, vanozvishanda vanodawo kuzvisiyanisa kubva kumakwikwi. Muchidimbu, iwe unotora mutoro mukuru mubasa rako rezuva nezuva. Anobvumawo kusagadzikana kunokonzerwa nekusava nemubhadharo wepamwedzi wakagadziriswa unobvumira kuronga chirongwa chehupenyu hwenguva pfupi nekusava nechokwadi kuduku. Mari inowanikwa inogona kusiyana munguva dzakasiyana dzegore uye inogadziriswa nemwaka. Gore rapfuura, chokwadi, rakanyanya kuoma kune vanozvishanda.
Hunhu hwevanyengeri vanozvishandira, zvisinei, zvinoratidza kupokana kuri pachena. Kune rimwe divi, zvakanyoreswa sekudaro. Asi anoitira kambani yaanotanga kudyidzana nayo. Chaizvoizvo anoita basa remunhu anobhadharwa pavashandi. Iwe unofanirwa kutevedzera kune yakaratidzirwa purogiramu, kutevedzera kugona kweako chinzvimbo uye kuzadzisa izvo zvakagadzwa zvinangwa. Zvisinei, mamiriro avo ezvinhu akasiyana. Kuburikidza nemhando iyi yekubiridzira, sangano rinoderedza mari yaro mukusarudza tarenda.
Maitiro ekusiyanisa venhema vanozvishandira kubva kune vanovimba vanozvishandira
Mamiriro ezvinhu umo iyo profil inovandudza chinangwa chayo yakarongwa mumamiriro ebasa rakashandirwa. Mamiriro ezvinhu nekodzero zvinogadziridzwa. Ikoko ndiko kunomuka kupokana. Pasinei neizvi, zvakakosha kuti tisavhiringidza nhamba inotsanangurwa mumushumo nebasa remunhu anozvimiririra anozvishandira, sezvo iyi fomu yekubatana iri pamutemo.
Iyo yekupedzisira inoita basa rayo guru kune mumwe mutengi. Kunyanya, inopfuura 75% yemari inoratidzira yekubatana uku. Basa ravo rakasiyana nerakaitwa nedzimwe nyanzvi dzakapinzwa basa nesangano. Kana iwe ukazviwana wakanyura mune yekutsvaga basa maitiro, haugone kungove wakatsvaga ekunyepedzera basa rinopihwa (kuvadzivirira). Iwe unogona zvakare kuongorora mamiriro ezvinhu umo kubatana kwehunyanzvi kunoitika.
Munhu wenhema anozvishanda haawanikwi kuronga zuva rake akazvimiririra, asi anofanira kuenderana nezviratidzo zvekambani. Uye zvakare, iwe unofanirwa kutora basa rekubhadhara inoenderana Social Security mubhadharo nenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi fake freelancer?
Nzira yekuve mudzidzisi wechikoro chekutyaira?
Chii chinoitwa nahematologist?